Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka oo tababar u soo xiray garsoorayaal “SAWIRRO” |
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka oo tababar u soo xiray garsoorayaal “SAWIRRO”
Munaasabadaan tababarka loogu soo xirayay 50 garsoore oo ka kala socday degmooyinka Gobolka Benaadir iyo Maxkamadda sare ee dalka oo ay ka qeyb galeen Guddoomiyaha Maxkamada sare dalka iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Tababarkan oo socday muddo labo cisho ah oo ay bixinayeen quburo ka socotay dowladda Britain ayaa waxa uu ku saabsanaa kor u qaadida iyo tayaynta aqoonta garsoorayaasha, si loo dar dar geliyo howlaha ay bulshada u hayaan, iyadoo hab cadaalad ah loo marayo.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka Abuukaate Ceydiid Cabdullaahi “Ilko-xanaf” oo soo xiray tababarka ayaa garsoorayaasha ku booriyay in waxyaabaha ay tababarkan ku qaateen ay ku dabaqaan howlaha ay bulshada u hayaan, waxaana uu intaa ku daray in tani ay qeyb ka tahay qorshaha maxkamaddu ay ku dooneyso kor u qaadidda tayada garsoorka dalka.
Abukaate Ceydiid Ilko-xanaf ayaa sidoo kale garsoorayaasha ka codsaday inay ilaaliyaan caddaaladda oo ay xaliyaan cabashada ka soo yeereysa qaar ka mid ah bulshada ee xagga garsoorka ah.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in ay qorsheynayaan sidii gobolada laga xoreeyay maleeshiyada Al-Shabaab looga furi lahaa xarumihii Maxkamadaha si shacabka ay u gaarto cadaaladda, arrintasina ay u gudbiyeen Madaxweynaha dalka.